भेडासँग जीवन विताएका मनबहादुरको अमेरिका घुम्ने रहर - नेपालबहस
भेडासँग जीवन विताएका मनबहादुरको अमेरिका घुम्ने रहर
| १५:३१:५५ मा प्रकाशित
२६ जेठ,बझाङ । हुम्ला जिल्लाको सिमकोट सेमन्या घर भई करिब ४० वर्षदेखि बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा बस्दै आएका मनबहादुर महत अहिले उमेरले ७६ वर्ष पुगे । हातमा चुरोट सल्काउँदै ४० वर्ष अगाडि बझाङ सदरमुकाम चैनपुर सम्झदै उनले भने, “चैनपुरमा औँलामा गन्ने घरहरु थिए । चैनपुरमा पाठा लिएर आउँदा, पाठा देउ जग्गा लेउ भन्थे, के गर्ने त्यो बेला भेडा, बाख्रालाई हामीले ठूला मान्यौ, त्यो बेला वुद्धि भएन, नत्र जग्गासँग पाठा साटेको भए, आधा चैनपुर हुन्थ्यो होला ।”
त्यतिबेला गाउँमा स्कुल थिएन । पढ्नु पर्छ भन्ने थाहा पनि भएन । १२ वर्षको उमेरमै भेडासँग हिड्न लागेका हामी दुई दाजुभाई भेडासँगै जिवन विताउन थालेको मनबहादुरले भने, “म हुम्लाबाट बझाङ आउँदा शुरुमा १८ पाठा थिए । हुदाँहुँदै कुनै बेला ११ सय बाख्रा, खसी, भेडाका छुट्टाछुट्टै गोल र आठ÷नौ जना ग्वाला ९हेर्ने मान्छे०, साथमा तीन÷चार वटा कुकुर पनि थिए । धनगढी र महेन्द्रनगर, डडेलधुरालगायतका ठाउँबाट सामान ल्याउँथे । त्यतिखेर यातायातका साधन भनेका नै भेडा, बाख्राहरु थिए ।”
“छोराले उतै विवाह गर्यो”। उनले भने, “उ पनि फोन गरेर कहिले काँही भेडा बेचेर घर आउँ भन्छ । घरपरिवार सबैलाई भेडाकै खर्चबाट पालन पोषण गरे । अहिले पनि घरमा ११ जनाको परिवार छ । श्रीमति वितेको भने केही वर्ष भयो । आफ्नो जिन्दगी भने दुःख गर्दै खायो । उहिलेका दुःख सम्झदा छोराछोरीलाई सुख छ, तागत छैन, सम्पति देख्दा माया लाग्छ, मलाई एक भेडा बेच्दा पुगिहाल्यो, आफूलाई नपुग्या छोराछोरीलाई देउ भन्नु, अब एकचोटी मर्नुभन्दा अगाडी अमेरिका घुम्ने मन छ । छोराले पनि अमेरिका लिन्छु भन्या छ । तर क्या अर्नु (के गर्नु ) देशभरी यस्तै छ । मान्छे माहामारीका कारण घान हुन लाग्याका छन (धेरैको संख्यामा मर्न लागेका)। बाँच्या पछि अमेरिका हेर्न जान्या रहर थियो । न तत्र सकियो ।”
भेडाका बथान गर्मी बढेपछि उकालो जाडो बढेपछि ओरालो ७ महिना पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग भर्खरै
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न १६ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु २३ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? ३२ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते ४० मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ४५ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ५३ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ५४ मिनेट पहिले
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ५६ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ५६ मिनेट पहिले
अग्रणी शक्ति बनाउन महाधिवेशनः अध्यक्ष थापा १७ घण्टा पहिले
माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालकमा हरिभक्त सिग्देल नियुक्त २४ घण्टा पहिले
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी पूर्ण रुपमा खोल्न पाइने ४ घण्टा पहिले
कांग्रेस नेता परियारको निधन ३ दिन पहिले
निजी डेरीलाई ढुवानी प्रतीकचिह्न प्रदान ३ दिन पहिले
मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिने एमाले संसदीय दलको निर्णय,ओली पक्षले बैठक बहिस्कार गर्ने २ हप्ता पहिले
होटल व्यवसायी पुनबाट स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ४ हप्ता पहिले
क्रेन बोकेर गुडिरहेको लोवेटमा करेन्ट लाग्दा २ को मृत्यु १ हप्ता पहिले
सीईडीबी हाइड्रोपावरको शेयरमा खरीद चाप उच्च २ हप्ता पहिले
कोरोनाले पुरुषको यौन चाहनामा कमी: अध्ययन २ हप्ता पहिले
दुर्घटनाका मृतक परिवारलाई गाउँपालिकाको राहत ३ हप्ता पहिले
मांसाहारी खाना धेरै खाएमा के के असर हुनसक्छ ? थाहा पाउनुस १ हप्ता पहिले
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठक ९ महिना पहिले
पाँच वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार, भद्रपुर विमानस्थल १५ दिनका लागि बन्द २ वर्ष पहिले
“रविन्द्र अधिकारी” सम्झनाको शोक गीत बन्यो भाईरल [भिडियाे सहित] २ वर्ष पहिले
दुतावास अगाडि नेविसंघले जलायो भारतको नक्सा २ वर्ष पहिले